တန် ၂၀၀၀၀ ပေါင်းစပ်သောဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - YiZheng Heavy Machinery Co. , Ltd.
နှစ်စဉ်ပေါင်းစပ်သောဓာတ်မြေသြဇာတန် ၂၀၀၀၀ ထုတ်လုပ်မှုသည်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ နိမ့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု။ ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်ကုန်ကြမ်း၏ granulation များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောပြင်းအားများနှင့်ဖော်မြူလာအမျိုးမျိုးရှိသောပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာများသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်လိုအပ်သောအာဟာရများကိုထိရောက်စွာဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်။
ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်သီးနှံအမျိုးမျိုးအတွက်မြင့်မားသော၊ အလတ်စားနှင့်အနိမ့်ကျသောပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ခြောက်သွေ့ရန်မလိုအပ်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရသော်ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာတွင်အနည်းဆုံးအာဟာရနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပါရှိသည် (နိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စဖရပ်၊ ပိုတက်စီယမ်) ။ ၎င်းတွင်မြင့်မားသောအာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှုနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်ရှိသည်။ ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာမျှတစွာဓာတ်မြေသြဇာအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်မြေသြဇာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးရုံသာမကပဲတည်ငြိမ်။ ကောက်ပဲသီးနှံများအထွက်နှုန်းကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများနှင့်တစ်နှစ်လျှင်တန် ၁၀၀၀၀ မှတစ်နှစ်လျှင်တန်ချိန် ၂၀၀,၀၀၀ ကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်လိုအပ်ချက်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်။
ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများတွင်ယူရီးယား၊ ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonia အရည်, ammonium monophosphate, diammonium phosphate, ပိုတက်စီယမ်ကလိုရိုက်, ပိုတက်စီယမ် sulfate, ရွှံ့နှင့်အခြား Filler များပါဝင်သည်။
၁) နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာ - ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonium thio, urea, calcium nitrate
၂) ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်မြေသြဇာ - ပိုတက်စီယမ်ဆာလဖိတ်၊ မြက်နှင့်ပြာစသည်တို့ဖြစ်သည်။
၃။ ဖော့စဖရပ်ဓာတ်မြေသြဇာများ - ကယ်လစီယမ်ဖော့စဖိတ်၊ လေးလံသောကယ်လစီယမ်ဖော့စဖိတ်၊ ကယ်လစီယမ်မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ၊
1. Composite ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနိမ့်, ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ကောင်းသောစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။
2. ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်များကိုအသုံးပြုသည်။ ခြောက်သွေ့သောအအေးပေးသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပစ္စည်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာလျှော့ချသည်။
၄။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီးအမှိုက်သုံးမျိုးမပါရှိပါ။ ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးနှင့်တာရှည်ခံသက်တမ်းရှိသည်။
5. ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာကုန်ကြမ်းများထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုအခါ granulation နှုန်းကိုအလုံအလောက်မြင့်မားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်ပေါင်းစပ်သောဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ပါအပိုင်းများပါဝင်သည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ အမှုန့်ဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊
၁။ Dynamic Batching Machine:
သုံးခုထက်ပိုသောပစ္စည်းများပါဝင်နိုင်သည်။ Batching Machine တွင် Silo သုံးခုထက်ပိုသောကြောင့်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များအရ Silo များကိုသင့်တော်စွာတိုး။ လျှော့ချနိုင်သည်။ silo တစ်ခုစီ၏ထွက်ပေါက်တွင်အီလက်ထရောနစ်တံခါးတစ်ခုရှိသည်။ Silo များအောက်တွင်၎င်းကို Hopper ဟုခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Hopper ၏အောက်ခြေသည်ခါးပတ်ပေါ်သယ်ဆောင်သူဖြစ်သည်။ Hopper နှင့် Belt conveyor ကိုဂီယာလီဗာ၏တစ်ဖက်တွင်ချိတ်ထားပြီးလီဗာ၏တစ်ဖက်ကိုတင်းမာမှုအာရုံခံကိရိယာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးအာရုံခံကိရိယာနှင့် pneumatic control အစိတ်အပိုင်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဤစက်သည်အီလက်ထရွန်နစ်အကြေးခွံများစုဆောင်းခြင်းကိုလက်ခံသည်၊ အသုံထိန်းချုပ်သူမှအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီ၏အလေးချိန်အချိုးသည်အလှည့်ကျသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ပါဝင်မှုတိကျမှု၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသုံးပြုမှုတို့၏အားသာချက်များရှိသည်။
၃။ ဒေါင်လိုက် disc feeder:
ကုန်ကြမ်းများကိုကြေမွပြီးနောက်၎င်းသည်ဒေါင်လိုက် disc feeder သို့ပို့သည်၊ ကုန်ကြမ်းကိုရောနှော။ ရောနှောပြီးအညီအမျှနှိုးဆော်သည်။ ရောနှောထားသောအတွင်းပိုင်းနံရံသည် polypropylene သို့မဟုတ် stainless steel plate ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောချေးခြင်းနှင့်ထဲမှာပါတဲ့နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းကပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ အဆိုပါရောနှောပစ္စည်းစည် granulator ဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ခြောက်သွေ့သော extrusion နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချန်လှပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ပြင်ပဖိအားများပေါ်တွင်မှီခိုသည်။ သို့မှသာပစ္စည်းအားပြောင်းပြန် roller clearance နှစ်ခုမှတစ်ဆင့်အပိုင်းအစများအဖြစ်ဖိအားပေးခံရသည်။ ပစ္စည်း၏အမှန်တကယ်သိပ်သည်းဆမှာ ၁.၅ မှ ၃ ဆအထိတိုး။ မြင့်မားသောစွမ်းအားစံနှုန်းသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန် stack အလေးချိန်တိုးမြှင့်ဖို့နေရာများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သော။ စစ်ဆင်ရေး elasticity နှင့်လိုက်လျောညီထွေ၏ကျယ်ပြန့အရည်ဖိအားများကချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများသိပ္ပံနည်းကျနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမသာပေမယ့်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, အမြန်သက်ရောက်မှုများနှင့်ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။
၅ ။ Rotary Drum မြင်ကွင်း:
၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အချောထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုသောပစ္စည်းနှင့်ခွဲထုတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဆန်ခါပြီးနောက်အရည်အချင်းရှိသောအမှုန်များကိုထုပ်ပိုးစက်ထဲသို့ထည့်သွင်းသည်။ အရည်အချင်းမရှိသောအမှုန်များသည်ဒေါင်လိုက်ကွင်းဆက်ကြိတ်ခွဲစက်ထဲသို့ထပ်မံဖြည့်တင်းပေးပြီးထုတ်ကုန်ခွဲခြားခြင်းနှင့်အချောထုတ်ကုန်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုသဘောပေါက်သည်။ စက်သည်အလွယ်တကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့်အစားထိုးရန်ပေါင်းစပ်ထားသောမျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုထားသည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံရိုးရှင်းပြီး fuck ဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပြီးတည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုသည်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမှုန်များကိုပြသပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုထုပ်ပိုးစက်ဖြင့်ထုပ်ပိုးသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းစက်သည်အလိုအလျောက်မြင့်မားပြီးအလေးချိန်၊ ချုပ်ခြင်း၊ ထုပ်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကိုပေါင်းစပ်သည်။ ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာအရေအတွက်ထုပ်ပိုးမှုကိုသိရှိပြီးထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုထိရောက်ပြီးတိကျစေသည်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်သွယ်ပေးသောကြောင့်သယ်ပို့စက်သည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဒီပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပေါ်တွင်သင့်အားခါးပတ်သယ်ဆောင်ပေးသူတစ် ဦး အားရွေးချယ်ပေးသည်။ အခြားအစီးအနင်းအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကခါးပတ်သယ်ယူပို့ဆောင်သူများသည်ကြီးမားသောလွှမ်းခြုံမှုဖြင့်သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုထိရောက်ပြီးချွေတာစေပါသည်။